ချစ်စရာပုံစံလေး နဲ့ အသဲယားဖွယ် ရိုက်ထား တဲ့ ဆုအိမ်စံ ရဲ့ အရမ်းမိုက်တဲ့ ဗီဒီယိုလေး – Shwe Sar
ချစ်စရာပုံစံလေး နဲ့ အသဲယားဖွယ် ရိုက်ထား တဲ့ ဆုအိမ်စံ ရဲ့ အရမ်းမိုက်တဲ့ ဗီဒီယိုလေး
အ ခုတစ်ခါ မှာ လည်း ဆုဆု ရဲ့ Tik Tok အ ကောင့် မှာ ဗီဒီယို လေး တစ် ခု တင် ထား တာ ပဲ ဖြစ် ပါ တယ် … ။ ဒါကတော့ မိတ်ကပ် ဆရာမ နဲ့ အတူ ထိုင်း မလေး တွေ ရဲ့ စကား ပြောသံ အတိုင်း တူအောင် လိုက်ပြော နေတဲ့ ဆုအိမ့်စံ ရဲ့ Tik Tok Video လေး ပဲ ဖြစ်ပါ တယ်..။ ပရိသတ် တွေ လည်း ကြည့် ရှု ခံစား နိုင်အောင် ဗီဒီယို လေး ကို တစ် ဆင့်ပြန် လည် ကူးယူ တင်ဆက် ပေး လိုက် ရပါ တယ် နော်..။
ရင်ခုန် စရာ ကောင်း တဲ့ ကောက် ကြောင်း အလှ တရား တွေကြောင့် ပုရိသ တွေ ရဲ့ အသည်းနှလုံး ကို ဖမ်းစား ထား သူက တော့ သရုပ်ဆောင် မင်းသမီးချော လေး ဆုအိမ့်စံ ပဲ ဖြစ် ပါ တယ် … . သူမ ဟာ အနု ပညာ မျိုးရိုးမရှိဘဲ ကိုယ့်ဒူး ကိုယ်ချွန် ကာ လုပ်ကိုင် ခဲ့ တာကြောင့် အောင်မြင်မှု တွေ များစွာ ရရှိ ပိုင်ဆိုင် ခဲ့ တာ လည်း ဖြစ်ပါ တယ် … . ဆုဆုရဲ့ ချစ်စ ရာ ကောင်း တဲ့ အမူ အ ရာ လေးတွေ ဟာ လည်း မိန်းက လေး ပရိသတ်တွေ ကို ပါ အချစ်တွေ ပိုစေ တာ လည်း ဖြစ် ပါ တယ် … .
လတ်တ လောမှာ တော့ ဆုဆုလေး တစ် ယောက် ကြော်ငြာ လေး တွေ လက်ခံ ရိုက်ကူး ဖြစ် နေ တာလည်း ဖြစ် ပါ တယ်..။ သူမရဲ့ လှုပ်ရှားမှု တွေ တိုင်းကို လည်း Vlog လေး တွေ ရိုက် ကူး ကာ YouTube မှာ တင်ပေး နေတာ လည်း ဖြစ်ပါ တယ်..။ အားလပ်ချိန် များမှာ လည်း Tik Tok လေး တွေ ဆော့ကစား လေ့ရှိ တာ လည်း ဖြစ် ပါ တယ် … . ပရိ သတ် တွေ က လည်း သူမရဲ့ ဗီဒီယို လေး တွေတိုင်း ကို ချစ်ခင် အားပေး နေ ကြတာ လည်း ဖြစ် ပါ တယ် … .
Previous post “ကျမ ဘရာဇီးသူမဟူတ်ပါဘူးနော် မီယမ်မာမပါ” လို့ဆိုပြီး အလန်းစား ဗီဒီယို တင်ပေးလိုက်တဲ့ “နန်းမွေစံ”
Next post အိပ်ယာထက်က အရမ်းကို ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ပုံလေး နဲ့ TIK TOK ဆော့နေ တဲ့ မျက်ဝန်း ရဲ့ ဗီဒီယို